किन कुनैकुनै महिलामा यौन चाहना जाग्दैन? यस्ता छन् ४ कारण – Himalaya TV
Home » समाचार » किन कुनैकुनै महिलामा यौन चाहना जाग्दैन? यस्ता छन् ४ कारण
किन कुनैकुनै महिलामा यौन चाहना जाग्दैन? यस्ता छन् ४ कारण
२२ फाल्गुन २०७४, मंगलवार १९:२३
मानिसको यौन चाहना सँधै एकै किसिमको पक्कै हुँदैन । तर यौन चाहना प्राकृतिक गुण भएकोले यसलार्इ सामान्यत: महिला र पुरुष दुवैमा अावश्यक मानिन्छ ।
तर विभिन्न कारणले कहिलेकाहीं मानिसमा यौन चाहना जाग्दैन । व्यक्तिको जीवन एउटै गति र लयमा पक्कै पनि बग्न सक्दैन । उसको जीवनमा थुप्रै यस्ता घटनाहरू घटेका हुन सक्छन् जसले उसको मानसिक तथा भावनात्मक पक्षमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छन् ।
तथापी, ‘यौनको चाहना नजाग्ने’ समस्या पुरुषहरूमा भन्दा महिलाहरूमा बढी देखिने गर्दछ । यसको मुख्य कारण भनेको भावनात्मक तवरले महिलाहरू बढी संवेदनशील हुनु हो । महिलाहरूको रजस्वलाचक्र सुरु हुनुभन्दा अगाडि उनीहरूको मनमा विभिन्न किसिमका भावनात्मक असन्तुलन पैदा हुन थाल्दछ। कसैलाई बिनासित्तीमा रिस उठ्ने हुन्छ भने कसैलाई रुन मन लाग्ने, खानामा रुची हट्ने जस्ता लक्षणहरू देखा पर्दछन्। यस्तो अवस्थालाई चिकित्सा भाषामा ‘पोस्ट मेन्स्रुअल सिण्ड्रोम’ (Post Menstrual Syndrome- PMS) भनिन्छ ।
तर चिकित्सकहरूले बताएअनुसार महिलाहरूमा यौन चाहना नजाग्नुका पछाडि मूख्यतः यी चार कारणहरू हुन सक्छन्:-
मधुमेह तथा उच्च र कम रक्तचाप जस्ता स्वास्थ्य समस्याले महिलाहरूको यौनाङ्गमा हुने रक्तसञ्चारलाई बाधा पुर्याइरहेको हुन सक्छ । यसरी यौनाङ्गमा सहजढङ्गले रगतको सञ्चार नहुँदा यौन चाहना जगाउने हरमोन ‘प्रोजेस्टेरोन’ र ‘एस्ट्रोजन’ को उत्पादनमा पनि बाधा आउँदछ । त्यसैले महिलाहरूलाई यौन सम्पर्कको चाहना हुँदाहुँदै पनि उत्तेजना जगाउन पाइरहेका हुँदैनन् ।
रजोनीवृत्ती (रजस्वला बन्द भएको अवस्था) भैसकेकी, स्तनपान गराइरहेकी, गर्भनिरोधक चक्कीको सेवन गरिरहेकी र गलगाँडको समस्या भएकी महिलामा यौन उत्तेजना पैदा गराउने हरमोनको पर्याप्त उत्पादन हुँदैन जसले गर्दा यौनेच्छामा रूची नहुन सक्छ ।
डिप्रेसनको औषधी, क्यान्सरको केमोथेरापी तथा पेनकिलर औषधी नियमित सेवन गर्नेहरूलाई पनि भन्नेबित्तीकै यौन चाहना नजाग्ने समस्याले सताउन सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
विशेष किसिमको शल्यक्रिया गरेका तथा औषधोपचार पद्दति अपनाएका महिलाहरूमा पनि यौन चाहनाको कमी आउने हुन्छ ।
माथि उल्लेखित कारणहरूलगायत अनिन्द्रा, थकान, चिन्ता तथा डिप्रेसनले पनि महिलाहरूमा यौनसम्पर्कप्रति वितृष्णा पैदा हुन सक्छ ।
हस्तमैथुन गर्नुहुन्छ? यससम्बन्धी भ्रमबारे जानौं